Tiri comprehensively chinopiwa risingaenzaniswi-siyana Direct vaingofamba-famba. The tarira zvaipiwa nesu weaved edu nounyengeri vashandi, uyo nechokwadi chokuti ichi riri ndima pamwe bhizimisi vakaisa mitemo. The akapa tarira inowanika nokurondedzerwa akasiyana-siyana. Kuwedzera kune izvi, redu aikoshesa nemakasitoma anogona kushandisa iri kufamba-kubva kwatiri nokurondedzerwa siyana panguva zvikuru inokwanisika mitengo.
hondo yedu yemhando yepamusoro zvigadzirwa kunosanganisira chete muunganidzwa Fiber vaingofamba-famba. The akapa tarira vari weaved edu unyanzvi nenyanzvi uchishandisa hwakanakisisa zvinhu kuti isu vawanire kubva kupfuura mvumo vapemhi yacho indasitiri. Uyewo, izvi zvakagadzirirwa panguva ndima chete indasitiri yepamusoro dzemunharaunda uye vari richiwanika inosiyana vatowanda musoro prices.
The zvigadzirwa vari akakodzera ose FRP Hull. Yokuita zvinhu dziri zvigaro, mvura tangi, motokari zvikamu, zvokuvakisa, utsanana nenhumbi, okuchengetera tangi uye zvichingodaro. Mumwe rakananga tarira mupumburu kufukidza nokuda shrinkage Kamudzira kana kudhirowa Kamudzira, ipapo akaiswa muruoko makadhibhokisi bhokisi kana dzinofunga nhovo. Mumwe nhovo anogona vanounganidza 48 kana 64 mabhanzi. Mumwe mupumburu uremu iri 15-18kg. Zvinonzi anogona kuwedzera mupumburu uremu maererano vatengi zvinodiwa. Nhovo wemagazini hakuna kuva kupfuura 2 akaturikidzana, hapana makadhibhokisi bhokisi achava kupfuura 5 akaturikidzana.